Akụkọ - ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa ndị akpụrọ roba na ngwaahịa ndị e mepụtara
Car ụzọ na windo akara ibe
Mwube roba akara warara
Edge nchedo ibe
Aka kabinet ụzọ akàrà
Ekpuchi roba akàrà
Amfụfụ roba warara
Self nrapado roba warara
Mechanical akara warara
Esemokwu dị iche iche dị n'etiti ngwaahịa ndị akpụrọ roba na ngwaahịa ndị nwere ngwaahịa
Esemokwu N’etiti Ngwa Ndị A Kpụrụ Akpa na Ngwaọrụ Extruded
Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-eji ngwaahịa roba arụ ọrụ. Maka ngwaahịa rọba na plastik nke a pụrụ ịhụ n’ebe niile, dịka mgbanaka akara, eriri roba, ọkpọkọ rọba, rọba rọba, gasket na ihe ndị ọzọ, ị maara n’ezie ka esi eme ha? N'ikwu okwu n'ozuzu, e nwere usoro ịkpụzi ụzọ abụọ nke ngwaahịa roba: ịkpụzi na extrusion, nke a ga-eme ka ọ bụrụ eriri roba na eriri extrusion n'otu n'otu. Ngwa ndị emechara nwere ọrụ dị iche iche na usoro dị iche iche, nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya. Kedu ihe dị iche na ngwaahịa na ngwaahịa ịkpụzi roba na ngwaahịa extrusion?
N'ime usoro ịkpụzi, a na-ebu ụzọ mee ntụ ntụ na agglomerate roba ngọngọ n'ime oghere nwere ụdị yiri nke ngwaahịa a rụchara, nke a na-etinye n'ime oghere nke ihe ọkụkụ ahụ, wee kpụzie ya, sie ike ma ọ bụ mezie ya site na imechi ebu ahụ, wee mechaa nweta ngwaahịa.
A na-eji ya na ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo, njem, ụlọ ọrụ eletriki na kemịkalụ, igwe ihe eji arụ ọrụ, ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị na mpaghara ndị ọzọ.
Ngwaahịa roba ndị e mere site na ịkpụzi usoro bụ ihe njikọ njikọta, akàrà nchebe na akụkụ mkpuchi eletriki, nke a na-eme n'ime mgbaaka akara, gaskets, aka nchekwa, plọg akara, aka uwe, gaskets, mmanụ akara, akụkụ dị iche iche na ngwaahịa ndị ọzọ.
Extrusion, nke a makwaara dị ka ịkpụzi extrusion ma ọ bụ ịkpụzi extrusion, na-ezo aka na usoro nhazi nke ihe na-eme ka ihe kpụ ọkụ n'ọnụ na plastik mgbe ọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu site na ọnwụ site na arụmọrụ nke gbọmgbọm extruder na ịghasa.
Na ịkpụzi extrusion, a na-ahọpụta onye nwụrụ anwụ, ịnwụ ma nwụọ, yana ngwaọrụ inyeaka kwekọrọ n'ụdị na ọdịdị nke ngwaahịa ndị a haziri ahazi, wee kpebie usoro extrusion ahụ, dịka ịghasa ọsọ, ịnwụ ọnwụ, ịtọ okpomọkụ, wdg Na usoro nke extrusion, ihe a na-abụkarị plastik, mma ma gwọọ ma ọ bụ vulcanized. Enwere ike inweta ngwaahịa dị iche iche site na usoro extrusion dị iche iche.
Enwere ike itinye extrusion na nhazi nke thermoplastic na roba iji ghọta batching, granulation na filtration roba. A na-ejikarị ngwaahịa ndị a na-ebupụ arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ihe ọkụkụ, ụlọ ọrụ petrochemical, imepụta ígwè ọrụ, akụrụngwa eletriki, ụgbọala na ụgbọelu.
N'iji usoro extrusion, anyị nwere ike ịme akara eriri, ọkpọkọ, efere, mpempe akwụkwọ, ihe nkiri, ihe nbipute ihe nbipute, waya na eriri ekpuchi roba, akwa roba taya, tube dị n'ime, ụdị ngwaahịa dị iche iche dị mgbagwoju anya, oghere, siri ike, na-asụ ụfụfụ ọzọ okokụre roba na plastic ngwaahịa.
Adreesị: 1-1-601, tian Kuo Shang Cheng, Ye Jin North Road, Xingtai, Hebei, China